Oromiyaa kessatti OPDOn fashalaa dhufuun isii TPLF garmalee yaaddessaa jira. – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsOromiyaa kessatti OPDOn fashalaa dhufuun isii TPLF garmalee yaaddessaa jira.
Jaarmayni OPDO Oromiyaa bulchuu kessatti fashalaa fi dadhabbii cimaa agarsiisaa dhufuun irraan kan ka’een Angawota TPLFn garmalee qeeqamaa jiraachuun jaarmaya OPDO gabaafamaa jira.
Angawonni OPDO warreen dhaaba isaanii kessatti malaammaltummaa hojjachuudhaan dhaabaa fi Ummata Oromo walitti buusaa turan if kessaa qulqulleysinee ja’anii haa gabaasanii malee haalli qabatamaan Oromiyaa kessstti deemaa jiru kan isaan kijibdiisaa jiru tahuu angawonni TPLF ifaan ifatti OPDOtti dubbataa jiru.
Haala kana laalchisee websaayitiin Tigraionline.com ja’amu kan angawota TPLFn hogganamaa jiru sadaasa 5/2017 akka gabaasetti angawonni OPDO Oromiyaa bulchuu kessatti fashaleenii waan jiraniif hogganttonni OPDO ol-Aanoon fashala kana kessatti qoda qaban manneen hidhaatti kan geffamuu qaban tahu isaanii midean TPLF Afaan Engliziin maxxanffamaa jirtu kuni eree jira.
Oromiyaa kessatti warreen jequmsa umaa jiran misenssotaa fi deggartota ABO waan tahaniif nageyaa fi tasgabbiin waaraan Oromiyaa kessatti akka jiraatu godhuudhaaf jaarmayni OPDO kuni misenssotaa ABO fi beytota Oromo ifitti dabaluudhaan Oromiyaa jequmsa keysaa baasuu kan qaban tahuullee midean TPLF kuni Jaarmaya OPDOf dhaamefii jira.
Websaatiin Tigrootaa kuni gabaasa isaa itti fufuudhsan jequmsa Oromiyaa kessatti deemaa jiruun walqabatee warshaan biyya Turkii kan milyona 78tti ijaaramee Uffata Omishaa jiru fi warshaan Simintto Daankotee kan milyona 50tti ijaaramee Oromiyaa kessatti hojjachaa jiruu fi warshaalee gurguddo biro hedduu irra kasaraan dinagdee hammana hin ja’amne kan dhaqqabee jiru tahuu midean kuni dabalee mirkanessee jira.
Haalli Oromiyaa kessatti deemaa jiru kuni biyyatti gara fakkenya biyya Suriyaatyi jijjiruun isaa waan maluuf sabaa fi sablsmmota ethiopia kessaa warreen akka Somali ethiopia Afari , Gaanbellaa , Adaree fi Ummanni Bani shanqool faan hirriiba dhiisanii Motummaa TPLF cinaa hiriirudhaan shira Ummanni Oromo fi Ummanni Amaraa tokkummaa Ummata ethioia diiguuf ofaa jiran kana dura kan dhaabbachuu kan qaban tahuu isaanii midean TIgroota kuni sabaa fi sablsmmota kanneeniif waamicha godhee jira.
Gara kaaniin walitti dhihenyi Ummata Oromo fi Ummata Amaraa jiddutti dhihenya kana mul’ataa jiru kuni wayyaanota gar-malee yaaddessuu irraan kan ka’een naanno Tigraayitti namonni ganna 15/40 jiddutti argman hundi isaanii gara moraalee linjitti geffamanii linjii waraanaa diqamaan fudhachiisaa kan jiran tahuu maddeen kenya naanno san irraa nuuf gabaasanii jiru.
Akkasuma Sanbata dabree Naanno Tigraayitti Angawonni TPLF Oromiyaa kessatti Lammilee Tigree nama sadihiitu nurraa ajjefame jechuudhaan hiriira mormii Ummata Oromo irratti yaamanii turan kan jalaa fashalaayee jiru tahuun gabaafamee jira.
A/Suutee Sadaasa 7/2017